Fankasitrahana asa soratra :: Natolotra an-dRavorombato ny amboara “Mpanoratry ny taona 2018” • AoRaha
Fankasitrahana asa soratra Natolotra an-dRavorombato ny amboara “Mpanoratry ny taona 2018”
Mpanoratra roa no nifaninana hisalotra ny anaram-boninahitra “Mpanoratry ny taona 2018”. Nivoaka mpandresy i Ony Lantoarimamy na Ravorombato eo amin’ny sehatry ny fanoratana. Natolotra azy ny amboara sy ny lamba landy mamaritra ny maha “Mpanoratry ny taona 2018” azy, tetsy amin’ny foiben’ny Vaomieram-pirenena malagasin’ny sampan’ny Firenena mikambana momba ny kolontsaina sy ny vakoka (Unesco) etsy Behoririka, tamin’ny alarobia lasa teo.
Mpanoratra, mpampianatra, mpikabary Ravorombato. Filohan’ny Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo izy. Manana ny mariboninahitra « Chevalier de l’Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture ». Maro ireo hetsika nampisongadina azy. Ankoatra ny amboara sy ny lamba landy, nomena Valiha Académie fahafahana mianatra valiha ao aminy ihany koa Ravorombato. Nanamarika ny fotoana ny fisian’ny sombin-tantara, ny antsan- tononkalo noravahana feom-baliha ary ny fanapahana koba.
Tsiahivina fa hetsika fanaon’ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT) ny fifaninanana “Mpanoratry ny taona…”. Natao hitiliana sy hanandratana ary handrisihana ireo manan- talenta amin’ny haisoratra mba hanohy izany hatrany.
Sehatra ifanakalozana :: Ilaina ny fampiarahana ny fiarovana ny kolontsaina sy ny tontolo iainana